Global Voices teny Malagasy » Nahazo Hatramin’ny $100.347 Hampafana Kokoa An’i Syria Mampalahelo Anaty Ririnina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 09 Desambra 2013 9:39 GMT 1	 · Mpanoratra Nour Al Ali Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Angletera, Etazonia, Kanadà, Syria, Ady & Fifandirana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Mpitsoa-ponenana, Vonjy Voina
Noho ny fanampian'ny mpiserasera, ny fikambanana mpanao asa-soa miorina ao Illinois antsoina hoe Karam Foundation no nahangona hatramin'ny $100.347 raha $10.000 no tanjony tao amin'ny fanentanana virtoaly iray “Manarata volombava, Ataovy Mafana Ny Zaza Syriana Iray” izay naharitra ny 30 Novambra ka hatramin'ny 4 Desambra.
Efa nampitampim-bava ny $56.287 azon'ny fanentanana nialoha ny 3 Desambra ka lasa nahazoany ny Fifaninanan'ny Razoo Foundation #GivingTuesday (manome isa-talata) , izay nahazoany $15.000 fanampiny. Mbola mitombo hatramin'izao ny sandan'ny fanampiana.
Mpandray anjara sy mpikarakara 27 avy amin'ny ekipa 2 miorina ao Etazonia, Kanada, ary ny Fanjakana Mitambatra (UK), no nifaninana hanangom-bola avy tamin'ny tsy nanaratana ny volombavan-dry zareo isaky ny movambra (novambra).
Loharanon-tsary: pejy fanangonam-bolan'ny Karam Foundation
Ny vokatry ny fanentanana dia handeha amin'ny fananganana entana mitentina $20 isanisany ho an'ny ankizy ao Syria izay ahitana akanjo mafana fitondra ririnina, bodofotsy, ary satroka, fonontanana na folara isanisany.
Kareem Omara, iray amin'ireo mpikarakara, niteny fa faly  izy fa tao anatin'ny fanentanana, ary nampiany fa mbola afa-mandeha lavitra ny fananana fanantenana:
Ny tsirairay aminareo dia olona mahafinaritra izay mahavita ny fahasamihafana na nanome ianao, na nanao dokambarotra, na inona na inona nataonao. Ny tiako lazaina dia mpianatra tsy nahatozo hatramin'ny farany aho ka tsy afa-manome betsaka, saingy nahita ny fomba fandraisako anjara aho. Aza kivy ka hieritreritra hoe tsy mahavita ianao. Afa-mandray anjara amin'ny fombantsika tsirairay avy isika, tsy ijerena izay habeny na hakeliny.
Mpikarakara iray, Kenan Rahmani nandrandrana amin'ny filàna mampivondrona ny ezaka hahazoana vokatra tsara kokoa:
Mahavita ny tsara kokoa isika rehefa miara-dia. Tena marina ry zareo. Ny vondro-piarahamonina mpikatroka dia tia mandeha amin'ny lalana folo (samihafa) amin'ny voalohany ary tsy mbola nahavita niara-dia tahaka izay nataontsika tamin'ity fanentanana ity loatra isika.
Ravoravo tamin'ny zava-bitan-dry zareo ihany koa i Mohannad:
70.000? haha… mihaotraotra fa nahavita nihoatra $95.000 isika <3 tena faly aho
Syriana mpanao matoandahatsoratra Robin Yassin-Kassab, izay nandray anjara tamin'ny fanentanana ihany koa, miantoka ny fahadiovam-pitantanan'ny  mpikarakara, ary nanampy fa:
Fantatro ny mpikarakara ity fiantrana ity ary afa-miantoka fa tena marina ry zareo, fa lasa any amin'ny fikarakarana fitafiana mafana ho an'ny ankizy Syriana amin'ity ririnina ity ny vola vola madinika indrindra. Manomeza azafady, ary zarao ity pejy ity. Andro vitsy monja no ananantsika hanangonana araka izay azontsika atao.
Tonga Ny Ririnina
Telo taona anaty hotakotaka, lavitry ny ho faty ny ririnina ao Syria, ary tahaka ny tsy hita ho akaiky ho avy ny lohataona. Rehefa tsy daroka baomba – dia ny fidobodoboky hatsiaka no mitazona ny anjely kelin'i Syria tsy hatory amin'ny alina. Tamin'ny Desambra 2012, ny fikambanana “Save the Children” (Avoty Ny Ankizy) nanaiky fijoroana vavolombelona sy sary  hanangona-kevitra momba ny zavamisy sarotra iainan'ny fianakaviana Syriana mandritra ny ririnina. Voatsonga ao amin'ny tatitra ny tenin'ilay 11 taona Ali nilaza fa na dia nisy aza ny fanampiana dia tsy ampy izany:
Bodofotsy izay no anananay. Tsy mana-javatra hafa izahay – eny fa akanjo aza. Nahazo bodofotsy iray izahay fa telo izahay. Ahoana no hampety izany aminay? Ahoana no hanafanany anay amin'izany? Tsy ampy. Mamrary izahay – lasa marary aho.
Vao tamin'ny volana lasa teo ny mpaka sary monina ao Istanbul antsoina hoe John Wreford niteny fa tsy ny sesintany ihany no iaretan'ny fianakaviana Syriana nafindra toerana fa ny tahotra atahorana ihany koa:
Mitakoko ao amin'ny zaridainan'i Istanbul nisy fianakaviana Syriana roa avy any Homs, zaza tena mbola kely folo, mihamangatsiaka ny isan'alina amin'izao fotoana izao.
Ilaina ihany koa ny fanampiana ao Syria, hoy ny mpikatroka iray monina ao Homs antsoina hoe Luisa Zangh, izay niangavy ny hisian'ny fanampiana mahaolona:
Antso hanetsehana ny mahaolona. Raha te-hanampy ianao, ataovy azo antoka fa handray bodofotsy i Syria. Tsy misy ny sakafo any avaratra ary mangatsiaka
Mikaonty na ny vola madinika indrindra aza. Mbola azonao atao ny manome eto .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/12/09/55481/
 Karam Foundation : https://www.facebook.com/pages/Karam-Foundation/104657656273847?ref=hl
 Fifaninanan'ny Razoo Foundation #GivingTuesday (manome isa-talata): http://news.razoo.com/2013/12/official-givingtuesday-results-donation-prize-winners/
 niteny fa faly: https://www.facebook.com/events/1420693414829402/permalink/1423168584581885/
 nandrandrana amin'ny filàna : https://www.facebook.com/kenanrahmani/posts/2755680928914
 miantoka ny fahadiovam-pitantanan'ny: http://qunfuz.com/2013/11/28/fight-the-winter/
 nanaiky fijoroana vavolombelona sy sary: http://www.savethechildren.org.uk/resources/online-library/out-cold-syrias-children-left-unprotected
 manome eto: https://mg.globalvoices.orgbit.ly/shavehisstache